१२१८ विन्दुमा परिसूचक, घट्यो शेयर बजार | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १२१८ विन्दुमा परिसूचक, घट्यो शेयर बजार
on: September 09, 2018 मुख्य खबर, लगानी
१२१८ विन्दुमा परिसूचक, घट्यो शेयर बजार
भदौ २४, काठमाडौं (अस) । आइतवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको छ । केही दिन अघि बजार बढेपनि लगानीकर्ताहरु न्यून अङ्कले बढेको बजारबाट पनि प्रोफिट बुक गर्न पछि परेनन् । यसमा लगानीकर्ताहरुमा मनोबल घटेको भन्ने बुझिन्छ । परिसूचकसँगै कारोबार रकम र लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति पनि घटेको छ । कारोबार रकम ५८ दशमलव ९८ प्रतिशत र बजार पूँजीकरण रू. १२ अर्ब ८५ करोडले घटेको हो । यस दिन पहिलो कारोबारदेखि बजार निरन्तर ओरालो थियो । परिसूचक १० दशमलव ७९ अङ्कले घटेर १ हजार २ सय १८ दशमलव ९८ विन्दुमा पुगेको हो ।
त्यस्तै, ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेर २ सय ५८ दशमलव १६ अङ्क पुगेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम घटेर रू. ३२ करोड ७० लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बजार पूँजीकरण घटेर रू. १४ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । यस दिन कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको हो ।
लघुवित्त समूहको परिसूचक १ दशमलव ६५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव ४४ प्रतिशत, जीवन बीमाको १ दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक १ दशमलव १ प्रतिशत, विकास बैङ्कको १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र जलविद्युतको १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, बैङ्किङ समूहको शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव २३ र वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको हो ।
एनआईसी एशिया बैङ्कको रू. २ करोड ५३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस वाणिज्य बैङ्कको १ सय ४५ पटकको व्यापारमा ६६ हजार ८ सय ७५ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यस बैङ्कको शेयर मूल्य रू. ४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३ सय ८२ पुगेको छ । जानकी फाइनान्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ६० प्रतिशतले बढेर रू. २ सय १७ पुगेको छ । त्यस्तै, ग्रीन डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर मूल्य ९ दशमलव ३५ प्रतिशत घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ सय २६ मा सीमित रहेको छ ।
यस दिन ३० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, १ सय २१ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने १५ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ६६ कम्पनीको ४ हजार ४ सय ८७ पटकको व्यापारमा १२ लाख ७२ हजार १ सय ८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ५७ दशमलव ५३ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव २४ अङ्क रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
नेप्से सामान्य अंकले सुधार हुँदा कारोबार रकम २८ करोडमा सीमित, असार मसान्त सकिन लाग्दा शेयरको माग बढ्दै
दोस्रो घण्टामा नेप्से स्थिर, १२४९.४२ विन्दुमा (१ बजेको अपडेट)
साताको पहिलो दिन पहिलो घण्टामा ३.५२ अंकले बढ्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)